Soo dejisan VirtualBox 5.1.6 – Vessoft
Soo dejisan VirtualBox
VirtualBox – software functional ah oo abuuraya mashiinada dalwaddii la nidaamyada hawlgalka kala duwan. Software waxay leedahay muujinta a ogolaanaysa in aad ku badbaadin state of nidaamka magac iyo lacala lagama maarmaan tahay inuu ku soo laaban gobolka hore. VirtualBox awood u yeeshay si loo kordhiyo fursadaha hawleed ah oo isticmaalaya daro, oo ay ku jiraan qalabka 3D-xawaaraha iyo file sharing u dhexeeya nidaamka hawlgalka. Software waxay leedahay qalab weyn oo isticmaala by horumarinta, tijaabiyeyaal iyo dadka isticmaala guud ee tijaabada shaqada nidaamyada ama barnaamij kala duwan oo aan dhibaato soo gaarto qaabka ugu weyn.
Taageerada nidaamyada hawlgalka kala duwan
Ku xiridda daro
In nidaamka hawlgalka dib u soo kabashada
Comments on VirtualBox:
VirtualBox Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... Tunngle 5.8.3
English, Español, Deutsch, Português... Microsoft Office Excel Viewer 12.0.4518.1071 iyo 12.0.6320.5000